Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Ngo-Novemba 22, 2020 00: 40 Awekho amazwana
Lapho sibhekene nezingqinamba noma izinselelo, masisebenzise ngokushesha imicabango yethu. Ukucabanga kuyikho konke. Kungukubona ikusasa lempilo yakho. Ukucabanga kuhle ...	Funda kabanzi
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Ngo-Novemba 22, 2020 00: 10 Awekho amazwana
UPépé Kallé Et L'Orchestre Empire Bakuba (LP), iNhloko yemibhalo (1), 1987 Imali Ayenzi Injabulo! (2 izinhlobo), Gefraco, 1988 uPépé Kallé noNyboma Moyibi (LP, Album) Sy ...	Funda kabanzi
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Ngo-Novemba 22, 2020 00: 00 Awekho amazwana
Kufanele uye kulezi zindawo ezi-3, kuleli cala: "Isibhedlela, ijele kanye namathuna". Esibhedlela, uzoqonda ukuthi akukho okubaluleke kakhulu ukwedlula ezempilo, e ...	Funda kabanzi
Isitha silibhubhisa kanjani izwekazi lase-Afrika? I-Afrika ibhujiswa ngale ndlela: isitha siqala ukucekela phansi imfundo, sihlukanisa abanesibindi nabanesibindi, sibulale izingcweti; yenza kube semthethweni inkohlakalo, ubuhlanga, ubuzwe, ubuhlanga kanye nokukhohlisa
Kuthunyelwe ngu: Roger Manzekeleku: Ngo-Novemba 21, 2020 06: 43 Awekho amazwana
Ngemuva kwalokho, unikeza amalungelo kumuntu ophakathi nendawo ozohlala esimweni sokuquleka nobuqili ukuze abone ukuhamba kwesitha lapho sisebenza ...	Funda kabanzi
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Ngo-Novemba 21, 2020 03: 03 Awekho amazwana
Umlando, abanye abasibhalela wona ngaphandle kwethu, uphikisana nathi. Yindaba engenamsebenzi; Indaba engaphambili; Indaba yokusondela; Indaba engamanga ...	Funda kabanzi
Indaba yangempela yoLwesihlanu Olumnyama: ULwesihlanu Olumnyama; kusho ngesiNgisi "Black Friday", Black Friday, kwenzeka ngosuku olulandelayo "Thanksgiving"
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Ngo-Novemba 21, 2020 00: 00 Awekho amazwana
Uma namhlanje le nkulumo isho ukuqala kwenkathi yokuphela konyaka yokuthenga, abantu abayazi le ndaba yangempela ngemuva kwale nkulumo, hi ...	Funda kabanzi
Nov29 05: 14